Japanese ozi ibu Line ẹkedori a cryptocurrency exchange
Japan nnukwu ozi ozi mara ọkwa taa – ya atụmatụ na-amalite na-arụ ọrụ a cryptocurrency exchange, na-nyeere n'ime ya chat ngwa na-bụ ubiquitous n'etiti ya 200 nde kwa ọnwa n'ọrụ ndị ọrụ n'ụwa nile.
The Tokyo dabeere chat ngwa gosikwara na ya ka gbara akwụkwọ na ngwa na Financial Services Agency (FSA) - Japan ego regulator - aha na ẹkedori a cryptocurrency exchange. The ngwa bụ ugbu a n'okpuru review.
The ozi ibu si ụzọ na-enye cryptocurrency trading abịa n'akụkụ mwepụta nke a ọhụrụ ụlọ ọrụ na-akpọ Line Financial, nke ga-amụ n'ime àjà ego ọrụ ọrụ.
Line Financial ndị Line bụ na-ama-ewu ewu mobile ego nyefe na ugwo ọrụ Line Ṅaa, a ọrụ nyeere n'ime Line nke ozi ngwa. na 2017, Line-akwụ topped 40 nde aha ọrụ ụwa na-enwe kwa afọ azụmahịa olu uku ¥ 450 ijeri ($4.1 ijeri).
Bitcoin mgbanwe Huobi ga-emeghe US ụlọ ọrụ
China dabeere Huobi, na mbụ otu n'ime obodo ndị kasị ukwuu cryptocurrency mgbanwe, ezube ẹkedori ihe ụlọ ọrụ dị na San Francisco.
Chief Strategy Officer cai Kailong kwuru “Huobi na-achọ na-eto eto mba… na U.S. ga-anyị na-elekwasị anya ugbu a.”
Huobi na-ewu ụlọ ọrụ ọhụrụ na Silicon Valley ebe, ihe e ji mara ndị push dị ka a ngwa-ngwa paced otu, dị ka a ọnụ na-ekwuchitere ụlọ ọrụ.
ikpeazụ nke ọnwa, Huobi mara ọkwa na ọ partnering na ego ụlọ ọrụ SBI Group ẹkedori a ụzọ cryptocurrency mgbanwe na Japan ka o wee chụọ yen ijikwa ọrụ.
SBI Virtual Ego na Huobi Japan na-adịghị mara ọkwa ọ bụla siri ike timelines maka ha na nwoke na-ebupụta.
South Korea si ego ozi: Ọ dịghị atụmatụ iji tie iwu megide cryptocurrencies
South Korea si ego ozi kwuru na gọọmenti nwere dịghị atụmatụ mechie cryptocurrency trading, welcome ozi ọma n'ihi na investors nchegbu na ọchịchị nwere ike na-aga dị ka China si siri edinam ke igbochi virtual mkpụrụ ego nyiwe.
The comment site Kim Dong-yeon on Wednesday-abịa dị ka ahịa n'ụlọ na gburugburu ụwa na e spooked site iche iche ihe si ọchịchị na South Korea, a isi ehiwe maka cryptocurrency ahia, na Seoul na-eme atụmatụ iji tie iwu megide obodo digital mkpụrụ ego mgbanwe.
"Ọ dịghị n'uche iji tie iwu megide ma ọ bụ ebelata cryptocurrency (ahịa),"Kim kwuru, agbakwunye gọọmenti ozugbo ozi bụ mezie mgbanwe.
Nwee ume Seoul ahụ zubere ikesiike kposara na a ahịa ebe hụrụ ka opaque na ize ndụ site zuru ụwa ọnụ policymakers, mba omenala na mbụ na Wednesday mara ọkwa ọ ekwuchi illegal cryptocurrency mba ọzọ mgbanwe trading uru fọrọ nke nta $600 nde.
"Customs ọrụ e anya na-achọ na iwu na-akwadoghị mba ọzọ mgbanwe trading iji cryptocurrency dị ka akụkụ nke ochichi ọrụ ike,"Ya kwuru.
Ònye bụ John Hyman, or what do ...
Previous Post:Olee otú na-a blockchain Mmepụta
Next Post:Olee na-eduzi ihe ICO na Switzerland